Wacaal Darey ah: Kenya oo ka baxday Kiiskii dacwada badda – Radio Daljir
Oktoobar 8, 2021 11:01 b 0
War hada soo gaaray warqabadka Daljir ayaa sheegaya in Dowladda Kenya ayaa ku dhawaaqday in ay ka baxday kiiska badda ee kala dhexeeyey Soomaaliya, sida ay sheegtay Wasaaradda Arrimaha-dibedda dalkaas.
Kenya waxay sheegtey in aysan aqoonsan doonin wixii ka soo baxa maxkamadda ICJ 12-ka October.
Wali ilaa hada maxakmada majirto wax go’aan ah oo kasoo baxay, balse waxaa xaqiiqo ah in Kenya ay ogaatay in maxakamadu ay Soomaaliya u xukumayso baddeen aoo ay kenya ku doodaysay.
Hadab su’aasha isweydiinta mudan ayaa ah, Kenya ma waxa ay bilaabi doonta beegsi aan kala sooc-laheyn marka lagaaro 10-ka October, kuna wajahan Siyaasiin iyo Ganacsato Soomaaliyeed!!
Daljir & BBCMA: BARAARUGGA Haweenka | (Taxanaha 93aad (dhegayso)